Waamichi bilbila bilisaa boobbii taaksii to’atu hojjiirra ooluuf akka jedhu ibsame – Fana Broadcasting Corporate
Waamichi bilbila bilisaa boobbii taaksii to’atu hojjiirra ooluuf akka jedhu ibsame
Finfinnee, Qaammee 6, 2011 (FBC) – Finfinneetti applikeeshiniin bilbila sochootuu fi waamicha bilbila bilisaa boobbii taaksii fi qoodinsa taarifaa to’atu hojjiirra ooluuf akka jedhu ibsame.
Finfinneetti boobbiin taaksoota minibaasii fi kaffaaltii taarifaa hinbarbaachiifne karaa ammayaan to’achuuf bilbila waamicha bilisaa fi applikeeshinii bilbila sochootuu yeroo dhiyootti hojiirra akka oolu Abbaan Taayitaa Geejjiba Finfinnee beksiiseera.
Itti aanaan Hojii gaggeessaa Abbaa Taayitichaa obbo Badiluu Leellisaa ibsa laataniin adeemsi haaraan kun rakkoo geejjibaa magaalitti furuurra darbee, taaksoonni minibaasii karaa seeraa qabeessaan hawaasa magaalittif tajaajila kennuu isaani to’achuuf ni gargaara jedhaniiru.
Taaksonni minibaasii tokko tokko sarara mootummaan ka’een alaa fi taarifaa ol kafaalchiisuun tajaajila akka kennaan ibsameera.
Gochi kun ta’uu kan danda’e gocha seeraan alaa abbootiin taaksoota qofa otuu hin taane, dadhabbina hojjetoota to’atanii akkasumaas to’annoon dame tajaajilichaa adeemsa ammayyaa hordofuu dhiisuun isaati jedhan.
Abbooti taaksii minibaasii taarifa oliin fe’anii fi sarara isaani ala hojjetanirratti tarkaanfii fudhatamuu eegale jedhan Itti aanaan Hojii gaggeessaa Abbaa Taayitichaa.
ji’a darbee keessaa abbooti taaksii 927 irratti himanni banamuu himaniiru.
kanarra kan darbe taarifa mootummaan kaa’ee olitti abbootii taaksii kafaalchiisaniiratti tarkaanfii fudhachuu fi tajaajjilli waamicha bilbila bilisaa hojjettotaa geejjibichaa yeroodhiyootti kan kennamu ta’u himaniiru.
Guyyaa sabaa fi sablammootaa 14ffaa Oromiyaatu qopheessa
Guyyaan nageenyaa addunyaa kabajamaa jira
Godina addaatti maddi anniisaa aduu ijaarrame tajaajila laachuu eegale
Manni Maree Mirga Namoomaa gamaaggama Ityoophiyaan dhiyeessite raggaasise